China na-agbanwe ntị gbalaga Integrated akpụ ụgbọelu nkpuchi igwe ụgbọelu disposable agbanwe ntị gbalaga nkpuchi machining factory na-emepụta | Idocha
Mmepụta akara nke na-agbanwe ntị eriri eriri ụgbọelu nkpuchi igwe tumadi na-agụnye eriri igwe nri, mpịachi na ịpị, imi akwa clip nri na nkpuchi akpụ. Ihe nkpuchi nkpuchi. Site n'iji ultrasonic wave, enwere ike ịgbanye ngwa ngwa, belata ma ọ bụ mechie ya site na ebili mmiri ozugbo, nke kwụsiri ike, ịchekwa ọrụ na arụmọrụ dị elu.
Na-agbanwe ntị gbalaga ụgbọelu nkpuchi igwe bụ akpaka akụrụngwa, nke bụ a atọ akụkụ nkpuchi n'ichepụta igwe na nyo ákwà oyi akwa. Site na nri akụrụngwa iji rụchaa ngwaahịa bụ akara nke ọrụ akpaka. A na-eji akwa na-agbanwe agbanwe eme ihe dị ka akụrụngwa maka eriri ntị, nke na-ejikọta ya na akpaghị aka.
--- Igwe dum site na isi nri nri, ntinye ntanye imi, akara akara, igbutu, emechaala na akpaghị aka.
--- Ngwakọta ihe omimi nke ultrasonic, okpukpu ato.
--- Modular imewe, mma ma dị mfe ọrụ, adaba mmezi, akpaka shutdown mkpu.
--- Igwe dum na - agbakwunye usoro ihe eji eme ihe nke aluminom, ihe di elu, ihe kwesiri ntukwasi obi na ihe kwesiri ntukwasi obi, ihe nchara ma di mfe.
--- Igwe ahụ dị obere, obere nha ma ọ naghị ewe ohere.
--- Njikwa mmemme PLC, nkwụsi ike dị elu, ọnụego ọdịda dị ala.
Aha ngwaahịa na-agbanwe ntị eriri ụgbọelu nkpuchi igwe
Nkọwapụta akụrụngwa 3600 * 900 * 1900mm
Ngwa ngwa sy-200t
Ike ọrụ ọkọnọ w 220 V / 50 Hz
Mmepụta arụmọrụ 150-200pcs / min
Ngwa akụrụngwa 3kw
Nke gara aga: Cup ụdị, cup ụdị ọkara akpaka nkpuchi igwe, ọkara akpaka cup ụdị nkpuchi igwe
Osote: Automatic elu ọsọ ọsọ imi ebi akwụkwọ mpịachi nkpuchi igwe
Nkpuchi Manufacturer, Packaging Afọ akpa, Uhie Uhie Uhie, Anti Static Afọ Cloth, Otu Dọrọ Otu Nkpuchi Igwe, Igwe nkpuchi ihu,